Kulamadii Boosaaso oo soo dhamaaday, Maxaase kasoo baxay?
BOOSAASO(P-TIMES) – Kulan saacado dheer qaatay oo dhexmaray Madaxweynaha Puntland & Wasiiro katirsan Xukuumadda Faderaalka ayaa waqtigan oo saq dhexe ah soo dhamaaday, waxaana qodobadii looga wada hadlay ay kala ahaayeen sharuudo ay kala wateen labada dhinac.
Wafdigu waxay cadeeyeen in ay yihiin Ergo u socotay sidii wada hadal miro-dhal ah looga dhex bilaabi lahaa Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya & Puntland, heshiiska la gaarana u noqon lahaa mid taabagal ah.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay ay miiska keenen xubnaha balanqaadyo ay ku jiraan mashaariic horumarineed oo laga fulinayo Puntland oo ay ku jiraan dadajinta wadooyinka laamiyo ah, Dugsiyada Farsamada gacanta, Kalluumeysi, Airporada oo dibu habeyn lagu sameyn doono iyo fursado kale oo muhiim u ah waqtigan Puntland.
Balse, waxay sheegeen in ay madaxda dawladda Soomaaliya doonayaan in fursadaha muhiimka ah looga faa’iideeyo dalka, si taasi loo helana looga baahanyahay in la abuuro daganaansho siyaasadeed.
Sidaas oo kale wafdigan, waxayna doonayaan in ay Puntland ka baajiyaan safarka magaalada Kismaayo, taas oo ay diiday Puntland, waxaana muuqata in uu Madaxweynuhu berrito u socdaalayo magaaladaas, si uga qeybgalo Caleema-saarka Jubbaland.
Ka sokow, Puntland waxay dhankeeda gudbisay arrimo u badan xagga siyaasadda oo ku jiheysan difaacida nidaamka Faderaalka, waxaana qodobada ugu badan ee ay soo jeedisay kamid ah Siyaasadda dalka sida ay ku wadaan madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya.
XOGAHAN OO FAAHFAAHSAN KALA SOCO PUNTLANDTIMES